spip media အကြောင်းသိချင်လို့ပါ.. — MYSTERY ZILLION
spip media အကြောင်းသိချင်လို့ပါ..
spip media အကြောင်းသိချင်လို့ပါ..joomla နဲ့တော့ ဆင်တူပါတယ် ..သေချာတော့မသိသေးပါ၀ူး သိတဲ့ အကိုအမများ နည်းနည်းလောက် ဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ်...
Oop!! why not try wordpress instead of SPIP. SPIP website is
spip ကို စမ်းသုံးကြည့်ချင်လို့ပါ.....အားသာချက် အားနည်းချက်လေးတွေလဲ သိချင်လို့ပါ..
Resources က မြန်မာလိုတောင် ရှိနေတာပဲ.....
ကိုယ်တိုင် စမ်းကြည့်ရင် အားသာချက် အားနဲချက် ကိုသိလာမယ်ထင်ပါတယ်။
Here's the source : http://www.spipmedia.net/?lang=my
SPIP ကို သင်ယူဖို့ သင့်မှာ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု အထူး ရှိနေဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒီသင်ခန်းစာက SPIP သုံးသူ အသစ်တွေအတွက် သရုပ်ပြတာတွေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ အမေး - အဖြေ ဉာဏ်စမ်းတွေနဲ့ တဆင့်ပြီးတဆင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လမ်းညွှန်ပေးသွားပါမယ်။